မနေ့က စိုးလွင်လွင်အမှတ်တရ မြန်မာ အိုင်ဒေါလ်ပွဲ ကို ဝင်ကြည့်ခွင့်မရပဲ လှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် – GuGuGarGar
မနေ့က စိုးလွင်လွင်အမှတ်တရ မြန်မာ အိုင်ဒေါလ်ပွဲ ကို ဝင်ကြည့်ခွင့်မရပဲ လှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
Shwe | November 29, 2019 | Cele | No Comments
မနေ့က ကြာသပတေးနေ့လေး ကတော့ အပတ်စဉ် မြန်မာအိုင်ဒေါလ် ရဲ့ performance show ပါ ။ ဒီအပတ်မှာ စုစုပေါင်း ပြိုင်ပွဲဝင် ၇ ဦးဟာ Top7 အတွက် ကို စိုးလွင်လွင် အမှတ်တရ သီချင်းများနဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်သူတွေ နောက်တစ်ဆင့် တက်မယ် ဘယ်သူတွေ လက်ပြနှုတ်ဆက် ရမယ်ဆိုတာတော့ လက်ရှိဖျော်ဖြေနေ တုန်းဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့ကျမှ အဖြေသိရမှာပါ ။
မနေ့ကပြိုင်ပွဲမှာ ထူးခြားဖြစ်စဉ် ကတော့ ဖြိုးမြတ်အောင် တစ်ယောက် မြန်မာအိုင်ဒေါလ်ပွဲ ကို ကြည့်ခွင့်မရတာပါ ။ ဖြိုးမြတ်အောင်ဟာ မနှစ်က Winner ဖြစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာအိုင်ဒေါလ်က မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ပါရမီရှင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
သူဝင်ခွင့် မရတာကတော့ လုံခြုံရေးက ဝင်ခွင့်မပေးခဲ့တာလို့ သိရပြီး ဖြိုးမြတ်အောင် ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ ပြန်ထွက်လာခဲ့သလို မြန်မာအိုင်ဒေါ ကြည့်ခွင့်မရတော့ မုန့်စားပြီးပြန်မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အရွှန်းဖောက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ် ။ ပရိသတ် တွေကတော့ ဖြိုးမြတ်အောင် ဘက်က ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ် ။ စီစဉ်မှု ညံဖျင်းတဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါလ် ဘယ်လဲ ဘာလဲ ?
မနကေ့ ကွာသပတေးနလေ့ေး ကတော့ အပတျစဉျ မွနျမာအိုငျဒေါလျ ရဲ့ performance show ပါ ။ ဒီအပတျမှာ စုစုပေါငျး ပွိုငျပှဲဝငျ ၇ ဦးဟာ Top7 အတှကျ ကို စိုးလှငျလှငျ အမှတျတရ သီခငျြးမြားနဲ့ သီဆိုယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈပါတယျ ။ ဘယျသူတှေ နောကျတဈဆငျ့ တကျမယျ ဘယျသူတှေ လကျပွနှုတျဆကျ ရမယျဆိုတာတော့ လကျရှိဖြျောဖွနေေ တုနျးဖွဈပွီး ဒီကနကေ့မြှ အဖွသေိရမှာပါ ။
မနကေ့ပွိုငျပှဲမှာ ထူးခွားဖွဈစဉျ ကတော့ ဖွိုးမွတျအောငျ တဈယောကျ မွနျမာအိုငျဒေါလျပှဲ ကို ကွညျ့ခှငျ့မရတာပါ ။ ဖွိုးမွတျအောငျဟာ မနှဈက Winner ဖွဈခဲ့ပွီး မွနျမာအိုငျဒေါလျက မှေးထုတျပေးခဲ့တဲ့ ပါရမီရှငျ တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ ။
သူဝငျခှငျ့ မရတာကတော့ လုံခွုံရေးက ဝငျခှငျ့မပေးခဲ့တာလို့ သိရပွီး ဖွိုးမွတျအောငျ ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ ပွနျထှကျလာခဲ့သလို မွနျမာအိုငျဒေါ ကွညျ့ခှငျ့မရတော့ မုနျ့စားပွီးပွနျမယျ ဆိုတဲ့အကွောငျးကို အရှနျးဖောကျပွီး လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ မြှဝခေဲ့ပါတယျ ။ ပရိသတျ တှကေတော့ ဖွိုးမွတျအောငျ ဘကျက ဒေါသထှကျနခေဲ့ပါတယျ ။ စီစဉျမှု ညံဖငျြးတဲ့ မွနျမာအိုငျဒေါလျ ဘယျလဲ ဘာလဲ ?
အ၀ှာကားရိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီး တင်မိတာကို ဝေဖန်သူတွေကြောင့် အပျင်းပြေရတယ် ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
သူမ ရဲ့ အလှတရားတွေပေါ်လွင်အောင် အမြူးကြွဆုံး သံစဉ်တွေနဲ့ အမိုက်စားကပြလိုက် တဲ့ ခင်လွှမ်းရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ မရှိသေးတဲ့ အမိုက်စား အနုပညာတစ်ခုကို ဖန်တီးကာ ချပြလိုက်တဲ့ JUNIOR CREATIVE
ကိုဗစ်ကာလကြီး မှာ မရောင်းရ လို့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အကယ်ဒမီ လွင်မိုး ရဲ့ လီလီပန်းခင်းကြီး